Halyeeyga kooxda Barcelona ee Rivaldo oo difaacay Gareth Bale, kahor kulanka El Clásico – Gool FM
(Madrid) 26 Feb 2019. Ciyaaryahankii hore ee reer Brazil iyo kooxda Barcelona Rivaldo ayaa difaacay Gareth Bale, kadib dhacdadii ku aadaneyd inuu iska diiday inuu la dabaal dago ciyaartoyda Real Madrid kulankii lasoo dhaafay ay la ciyaareen Levante, kaasoo ku soo idlaaday 2-1 ay guusha ku raacday Los Blancos.
Rivaldo ayaa kahor kulanka habeen dambe El Clásico ee lugta labaad wareega 4-ta Copa del Rey ku dhex mari doono kooxha Barcelona iyo Real Madrid wuxuu si weyn u difaacay Bale.
“Bale ma ahan mid xun, ama ciyaaryahan jecel dhibaatooyin, waxaan arintaas ka akhriyay jaraa’idka, balse aniga kuma qancin, sida ay ila tahay ciyaaryahanka ayaa u muuqday mid careysan”.
“Ciyaartoydu waa dad bani’aadam ah, mana dareemi karaan dareenkooda mararka qaarkood”.
“Gareth Bale wuxuu awoodaa in Real Madrid uu ka caawiyo in ay guul kaga gaarto kooxda Barcelon kulnka El Clásico, waa ciyaaryahan ku fiican kulamada waaweyn, wuxuuna dhaliyaa gool marka uu badal ku soo galo ciyaarta”.
DAAWO: Arag wixii uu sameeyay Hazard kaddib markii ay Man City Rigooradii guusha ee Carabao Cup ka dhalisay Chelsea